Wax ka ogow taariikhda ciyaaryahankii hore ee Xasan Cafiif | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Wax ka ogow taariikhda ciyaaryahankii hore ee Xasan Cafiif
Wax ka ogow taariikhda ciyaaryahankii hore ee Xasan Cafiif
Himilo FM –Magaciisa oo dhameystiran waa Xasan Cafiif Yaxye waxa uu ku dhashay magaalada Mowshi ee dalka Tanzania sannadkii 1952-kii, waxa uu ku barbaaray gudaha dalka gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose.
Waxa uu kubadda ku soo biiray isaga oo jira 12 sanno, 1971-kii ayaa markiisii ugu horreysay loo magacaabay ciyaaryahanada Gobalka Jubbada Hoose, waxa uu xilligaasi soo bandhigay ciyaaro aad loogu riyaaqay, waxa uu u ciyaaray kooxo badan oo ka dhisan Kismaayo sida Dekedda, Minishiibiyo ama dowlada hoose oo labadaba ka dhisnaa gobalka Jubbada Hoose, Intii u dhaxeysay 1971 illaa 1972 ayuu ka ciyaareyay Kismaayo.
Cafiif waxa uu ku guuleystay intii uu ku guda jiray waayahiisa ciyaareed koobab dhowr ah, Gobalka Jubbada Hoose waxa uu la tiigsaday shan jeer tartanka gobalada isaga oo ku guuleystay seddex jeer, waxa uu qaaday sidoo kale tartankii dugsiyad ee gobalada hal jeer, Xasan ayaa sidoo kale ku guul dareystay hal jeer.
Kooxda Horseed waxa uu ku soo biiray xili ciyaaredkii 1975-kii, waxa uu ku sugnaa muddo shan sanno ah, isaga oo kula guuleystay shan horyaal iyo labo General Daa’uud ah.
Sanaddii 1973- kii Cafiif ayaa loo magacaabay xulka qaranka Soomaaliya,waxa uu xiligaa u ciyaarayay gobalka Jubbada Hoose oo uu ku soo bandhigay farsamooyin iyo gool dhalin aad loogu riyaaqey. Cafiif waxa uu ka soo ciyaaray dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Zanzibaar, Liibiya, Ugandha, Kenya, Tanzania, Yemen, Suudaan iyo Burundi.
Kooxda kubada cagta Simba ee ka dhisan dalka Tanzania waxa uu ka mid noqday 1981-kii isaga oo markii ugu horreysay muddo 16 sanno kaddib u suurta geliyay FC Simba inay ku guuleystaan koob, waxa uu la qaaday seddex koob labo ka mid ah waa Central Africa, Sidoo kale waxa uu u soo ciyaaray Etihad Sports Club waxa uu ka mid ahaa Saddex sanno intii u dhaxeysay sanadihii 1992-94 kii, waxa uu kula guuleystay hal koob isagoona u sahlay inay gaarto heerka koowaad.
Xasan Cafiif waxa uu waxbarasho tababarnimo u tagay wadamada Brazil, Italy iyo Doha, caasimadda Qatar. Cafiif ayaa tababare ka noqday kooxo ka dhisan wadamada Qatar iyo Tanzania sida kooxda Etihad, Al Zadd, Kooxda Marqiya iyo naadiga FC Simba ayuu maamule kasoo noqday.
Koobabka uu kula guuleystay waxaa kamid ah Kooxda Zadd, waxa uu kula guuleystay laba koob oo isugu jira ciyaartoyda da’dooda ka hooseyso 16-21 jirrada, waxa uu sidoo kale Fc Simba kula guuleystay Horyaal isaga oo macallin ah.
W/Q: Maxamed Xasan Maxamed ” Owen”
Previous: Mesut Ozil oo loo raadinayo kooxo bixin kara mushaarkiisa
Next: Nin qariyay wajigiisa mar la guddoonsiinayay bakhtiyaa nasiib 1 Milyan oo dooalar!